खुसीको ‘राम साइँला’, रुकमान-वर्षाको रोमान्स ! « Drishti News – Nepalese News Portal
खुसीको ‘राम साइँला’, रुकमान-वर्षाको रोमान्स !
१ कार्तिक २०७७, शनिबार 11:28 am
काठमाडौं, १ असोज । गायक तथा मोडल रुकमान लिम्बू एक भिडियोमा अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीसँग देखिँदैछन् । पछिल्लो समय गायनमा भन्दा बढी मोडलिङमा बढी व्यस्त हुँदै आएका रुकमामा र वर्षा ‘राम साइँला’ बोलको गीतको भिडियोमा देखिन लागेका हुन् । जुन गीतको भिडियो छायाँकन हालै गरिएको छ ।
गायिका खुसी थुलुङले गाएको ‘राम साइँला’ पूर्वेली लोकफ्लेवरमा छ । उक्त गीतको भिडियोमा रुकमान र वर्षाबीच अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छन् । थुप्रै गीतको मोडलिङ गरिसकेका रुकमान र अभिनेत्री वर्षाको यो पहिलो स्क्रिन शेयर हो ।
गायकसमेत रहेका विक्रम राईको संगीत रहेको ‘राम साइँला’ गीतलाई डिपी खनालले लेखेका हुन्, जो पछिल्लो समय गीत लेखनमा चर्तित छन् ।
उक्त गीतको भिडियो यसै साता दर्शकसमक्ष सार्वजनिक गरिने निर्माणपक्षले जनाएको छ । भिडियोमा छायाँकन निसाल पौडेल, सह–निर्देशन लोमश पौडेल र सम्पादन विकास दाहालको रहने भएको छ ।